China L-Theanine Ukwenziwa kunye nefektri | Ukuxubana
Igama lesiNgesi: L-Theanine
Ifomula yeMolekyuli: C7H14N2O3
Ubunzima bezinto: 174.2
I-L-theanine yi-amino acid efumaneka ngokuxhaphakileyo kumagqabi eti nakwisixa esincinci kwii-mushroom zeBay Bolete.
Ikwafumaneka kwifom yeepilisi okanye yeethebhulethi kwiindawo ezininzi ezithengisa iziyobisi.Uphando lubonisa ukuba i-L-theanine ikhuthaza ukuphumla ngaphandle kokozela. Abantu abaninzi bathatha i-L-theanine ukunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye nokuphumla.
Abaphandi bafumanise ukuba i-L-theanine iye yehla uxinzelelo kunye neempawu eziphuculweyo.
I-L-theanine inokunceda ukwandisa ukugxila kunye nokuqwalaselwa.Uphononongo luka-2013 lufumanise ukuba amanqanaba aphakathi e-L-theanine kunye ne-caffeine (malunga ne-97 mg kunye ne-40 mg) incede iqela lolutsha ukuba lijolise ngcono ngexesha lomsebenzi onzima.
Abathathi-nxaxheba besifundo baziva bephaphile ngakumbi kwaye bengakhathali ngokubanzi. Ngokolunye uphando, ezi ziphumo zinokuviwa kwimizuzu nje engama-30.
Olunye uphando lubonisa ukuba i-L-theanine inokuphucula ukusebenza kwamajoni omzimba. Olunye uphononongo olupapashwe kwiphephancwadi Iziselo zafumanisa ukuba i-L-theanine inokunceda ukunciphisa izehlo zosulelo oluphezulu lokuphefumla.
Olunye uphononongo lufumanise ukuba i-L-theanine inokunceda ukuphucula ukudumba kwindawo yamathumbu. Nangona kunjalo, uphando oluninzi luyafuneka ukuqinisekisa kunye nokwandisa kwezi ziphumo.
I-L-theanine inokuba luncedo kwabo bafumana uxinzelelo lwegazi kwiimeko zoxinzelelo.Uphononongo luka-2012 luqwalasele abantu abaqhele ukufumana uxinzelelo lwegazi oluphezulu emva kwemisebenzi ethile yengqondo. Bafumanise ukuba i-L-theanine incede ukulawula ukonyuka koxinzelelo lwegazi kula maqela. Kwakweso sifundo sinye, abaphandi baqaphela ukuba icaffeine ineziphumo ezifanayo kodwa ezingabalulekanga kangako.
I-L-theanine inokunceda amakhwenkwe afunyaniswe enengxaki yokungasebenzi kakuhle (ADHD) xa elala ngcono.Uphononongo luka-2011 lukhangele kwiziphumo ze-L-theanine kumakhwenkwe angama-98 aneminyaka esi-8 ukuya kweli-12. -theanine kabini imihla ngemihla. Elinye iqela lafumana iipilisi ze-placebo.
Emva kweeveki ezintandathu, iqela elithatha i-L-theanine lafunyanwa linokulala ixesha elide. Ngelixa iziphumo zithembisa, uphando oluthe kratya luyafuneka ngaphambi kokuba kuqinisekiswe ukuba lukhuselekile kwaye lusebenza, ngakumbi ebantwaneni.
Amanyathelo okhuseleko: gcina kwindawo yokugcina izinto epholileyo, eyomileyo nenomoya.
Egqithileyo IHordenine hydrochloride
Isodium Beta Hydroxybutyrate (BHB Na)